Garsooreyaal Tennis-ka Ah Oo Muqdisho Lagu Tababarayo. (bbc somali) - iftineducation.com
Garsooreyaal Tennis-ka Ah Oo Muqdisho Lagu Tababarayo.
iftineducation.com – Xairiirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha tennis-ka ayaa maanta Muqdisho ka furay tababar soconaya muddoo lix casho ah oo ay ka qeybgalayaan shan iyo toban garsoore oo ciyaaraha tennis-ka dhexdhexaadiya.
Guddoomiyha xiriirka tennis-ka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Ciise oo ka hadlay furitaankii tababarka ayaa sheegay inay ku dadaalayaan horumarinta ciyaaraha iyo garsoorka tennis-ka, isla markaana ay doonayaan inay la jaa-qaadaan caalamka.
Maxamed Rafaat Bassyouni oo u dhashay dalka Masar, kana mid ah macallimiinta tababarka bixinaya ayaa sheegay in Masar iyo Soomaaliya ay walaalo yihiin, isla markaana uu ku faraxsan yahay inuu Muqdisho yimaado, tababarna uu ku bixiyo.
Guddoomiye ku xigeenka guddiga olmbikada Soomaaliya, Durraan Axmed Faarax oo furitaankii tababarka ka qeybgalay ayaa sheegay in Soomaaliya oo ka soo kabsaneysa dagaallo muddo sanado ah dalka ragaadiyay inay u heellan tahay horumarinta isboortiga, isagoo Muqdisho ku soo dhoweeyay Maxamed Rafaat.